Shijiazhuang Teneng korontada & Farsamada Qalabka Co., Ltd
Shijiazhuang Teneng korontada & Farsamada Qalabka Co., Ltd. waa soo saaraha xirfadeed ee khadka welded tuubooyin bir-soo-saarka, Kitaabkii duudduubnaa oo qabow la xirrira line, kurka line, gooyaa-to-dhererka line iyo qalabka la xiriira kaabayaal ah. Shirkadda Teneng waa shirkad casri ah oo awood u leh cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta. Teneng waa xubin golaha ka mid ah Shiinaha Roll U samaynta Association, xubin Madaxweynaha Tube Hebei Steel Ganacsiga Association ah.
mashiinada Teneng yihiin qalabka wax soo saarka ugu fiican ee tube laga heli karo dunida. In Shiinaha, ee dadka isticmaala si fiican u yaqaan waa Hebei Jingye Group, SANY Group, Shiinaha Dhismaha maraakiibta Industry Corporation, Chongqing Changzheng culus Industry Co., Ltd iwm
mashiinada Teneng ka shaqaynaynaa in dalal kale oo badan Shiinaha ka sokow, sida
American, Portugal, Venezuela, Brazil, Paraguay, Russia, Ukraine, Japan, Saudi Arabia, Sudan, Uzbekistan, Kazakhstan, Vietnam, India, iyo wixii la mid ah. Teneng ammaan universal ka macaamiisheena adduunka oo helay by sheyga tayo sare leh iyo adeegga kaamil-iib aheyn ka dib.
baahida Customer waa xoog la wadidda horumarka farsamada, xoog shirkadda xoog badan tahay taageerada casriyaynta jidadku of technology ee. Shirkadda Teneng shaqeyn doono saarayaasha gudaha iyo dibadda si ay ugu deeqdo qalab tayo-sare, technology xirfadeed, adeeg fiican ee macaamiisha.
No. Of Shaqaalaha : 150 ~ 200
Year la aasaasay : 2009
Dhoofinta PC : 90% - 100%
Tan iyo abuuritaanka, shirkadda Teneng leeyihiin boqolaal sahayda of khadadka-soo-saarka loogu talagalay macaamiisha, waxaan xoolo ah oo waayo-aragnimo farsamo. Under hanuunka khubaro Guriga iyo Professor, Teneng ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa technology advanced shisheeye, dhuuqin, hal abuur iyo horumarinta dhaxanta dabacsan sameynta tiknolojiyada. qalabka Teneng ee loo isticmaalo in biibiile API, baabuurta, iyo biibiilaha dhismaha, iyo biibiilaha alaabta guriga, wax soo saarka weelka, darfaha xayndaabka, qalabka ciyaaraha iyo wixii la mid ah.
Production Power & System Adeegga :
Shirkadda Teneng leeyihiin malaayiin mitir murabac oo warshad, iyo sidoo kale waxay leeyihiin nidaam adag oo isuduwidda la soo saaridda alxanka iyo caaryada. qaybaha caadiga ah qalabka lagu doorto alaabta ganacsi si fiican u yaqaan, qaab wax soo saarka la wanaajiyey iyo nolosha adeeg. From processing qayb shirkii mishiinka, waxaan ka dhigi jeegaga dhammaan heerarka kala duwan, iyo fuliyaan on nidaamka mas'uuliyad-soo-saarka. Ka dib markii shakhsi adeeg tababar ay ka soo dhaqanka, ku hawlan guddoominta qalabka sanado badan, si ay u xaliyaan dhibaatooyin kala duwan ku dhaqanka soo-saarka, qalabka hanuun rakibaadda iyo shaqaalaha tababarka loogu talagalay macaamiisha ah.
xoog farsamo Strong iyo nidaamka adeeg san yahay madaxa rukunka Teneng ee.
Teneng leeyihiin 15 injineerada design iyo 80 injineer komishanka, oo kulligood waxay u leeyihiin in ka badan 15 sano oo waayo aragnimo ah in industry dhagax tuubada. shaqaalaha Teneng ayaa waxaa had iyo jeer ku dul qarkii ugu horeeysa ee technology, raad iyo horumarkii ugu dambeeyay ee technology dhagax tube, gudaha suuqa iyo isbedelka baahida macaamiisha ah ee, ka dhigi tabo cusub ee technology sare loo isticmaalo wax soo saarka.